Manana tendrombohitra be voninahitra i Alemana, ambanivohitra mifoka rivotra, sy ny tanàn-dehibe cosmopolitan izay manao traikefa mahasarika ny fandehanan'ny lamasinina. Misy toerana mahafinaritra maro to see including Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, ary Frankfurt, sy ny maro hafa. Ireo toerana mafampana sy ny tanàna kely rehetra mifampiankina iray voalamina tsara hi-hafainganam-pandeha fiaran-dalamby rafitra. Izany mahatonga lamasinina mandeha any Alemaina mora. Ity ny mpitari-dalana ho an'ny holidaymakers for fiaran-dalamby mandeha any Alemaina mba hahazoana antoka manana ny tena mahafinaritra ny dia azo atao.
The best use of Train travel in Germany is during the day, anisan'izany ny fifadian-kanina Intercity Express, do not require seat reservations. Na izany aza, Raha toa ianao mihevitra ny dianareo tsy misy ratsy ao famandrihana ny toerana mialoha. Ataovy izay hahazoana varavarankely seza ho an'ny ny toerana manodidina, na mifidy ny seza fotsiny mba hahazoana antoka anao hiaina indrindra fampiononana.
Alemaina dia toerana lehibe nandeha miaraka amin'ny fianakaviana. Tao amin'ny lalamby alemà fiarandalamby, children under the age of six travel for free with no ticket needed. Children over 6 fa taona ambany 15 koa mandeha maimaim-poana indray mandeha izy ireo ny saran-dalana miaraka amin'ny karama olon-dehibe.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)